SAADAAL: Kadib Shaacintii FIFA Ee Musharixiinta Shaxda Kooxda Aduunka Ugu Fiican, Shabakada Gool24 Oo Saadaalisay 11 Ka Xidig Ee Shaxdan Ku Soo Bixi Kara. - Gool24.Net
SAADAAL: Kadib Shaacintii FIFA Ee Musharixiinta Shaxda Kooxda Aduunka Ugu Fiican, Shabakada Gool24 Oo Saadaalisay 11 Ka Xidig Ee Shaxdan Ku Soo Bixi Kara.
FIFA ayaa si rasmi ah u shaacisay liiska musharixiinta shaxda kooxda aduunka ugu fiican ee FIFPro World XI 2019 waxaana sidii caadada ahayd liiskan ku soo baxay 55 ciyaartoy oo ku yimid codbixinta ciyaartoyda kubbada cagta ee ay xirfada wadaagaan.
Shaxda kooxda aduunka ee sanadkan 2019 waxaa la bixi doonaa isla bishan September 23 iyada oo xaflada abaal marinaha sanadka ee FIFA lagu qaban doono magaalada Milan ee dalka Talyaaniga.
Musharixiinta shaxda kooxda aduunka waxaa ku soo baxay inta ugu badan ciyaartoyda aduunka ugu fiican waxaana adag in si sahlan lagu kala saari karo.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa saadaal ka bixisay xidigaha ku soo bixi kara shaxda kooxda aduunka ugu fiican ee sanadkan ay FIFA abaal marin karto iyada oo aan ku salaynay 11 kii xidig ee ugu bandhiga fiicnaa ee ay suurtogalka tahay in ay shaxdan ka soo muuqan karaan.
Caadiyan marka shaxda kooxda aduunka la qiimaynayo waxaa lagu soo xushaa ciyaartoydii boos kastaba ugu bandhiga fiicnaa.
Haddaba iyada oo dhamaadka qormadan aanu idinka markiina idiin soo wareejin doono in aad saadaalisaan shaxda kooxda aduunka ugu fiican ee magaalada Milan lagu abaal marin doono aan marka hore saadaasha Gool24 idiin soo gudbiyo.
Sida la filayo, goolhayaha xulka qaranka Brazil iyo kooxda Liverpool ee Alisson Becker ayaa la filayaa in uu ku guulaysan doono goolhayaha aduunka ugu fiican ee shaxda FIFPro World XI iyada oo aan filayno in uu ka guulaysan karo afarta musharax ee la tartamaya oo kala ahDavid de Gea,Ederson Moraes ,Jan Oblak iyo Marc-Andre ter Stegen.
Sababta aan Alisson ugu saadaalinay in uu shaxda kooxda aduunka ka soo bixi doono ayaa ah in uu kooxdiisa Liverpool kula soo guulaystay Champions League isla markaana uu xulkiisa Brazil ka soo caawiyay koobka Copa America.
Difaaca dhexe ee shaxda kooxda aduunka ugu fiican ee FIFA ay bixin doonto waxaan u soo qaadanay Matthijs de Ligt iyo Virgil Van Dijk oo xili ciyaareed layaableh soo qaatay waxaanan filayaa in labada difaaca ee reer Holland ay shaxda kooxda aduunka ugu fiican ay isku bahaysan karaan.
Iyada oo musharixiinta liiska ku jirta ay doorashada shaxda kooxda aduunku ku kooban tahay, waxaan difaaca bidix iyo midig ee u soo qaadanay Trent Alexander-Arnold iyo Aymeric Laporte oo ka kala tirsan kooxaha Liverpool iyo Man City sida ay u kala horeeyaan.
Inkasta oo ay adag tahay in Ady Roberston uu shaxdan ka maqnaan karo, haddana Aymeric Laporte oo difaaca dhexe iyo bidix shaqo layaableh uga soo qabtay Man City ayaa ka soo hor mari kara halka Trent Alexander-Arnold ay adag tahay in difaaca midig lagula tartami karo.
Khadka dhexe ee shaxda kooxda aduunka ugu fiican waxaan u soo dooranay Frenkie de Jong, Bernardo Silva iyo Eden Hazard.
Frenkie de Jong oo dhawaan loo doortay khadkii dhexe ee Yurub ugu fiicnaa sanadkan ayaan filaynaa in uu markale ku soo bixi doono khadka dhexe ee shaxda kooxda aduunka ugu fiican halka Bernardo Silva oo wacdaro layaableh ka soo dhigay Man City iyo xulkiisa Portugal uu shaxdan si wayn ugu qalmo.
Eden Hazard oo kooxdiisii hore ee Chelsea ka soo caawiyay Europa League isla markaana loo doortay xidigii tartanka Europa League ugu fiicnaa ayaa khadka dhexe ee shaxda kooxda aduunka aanu ku soo darsanay.
Saddexda weerarka shaxda kooxda aduunka ugu fiican, waxaan u soo xulay Kylian Mbappe, Lionel Messi iyo Sadio Mane.
Dhamaan saddexdan xidig ayaa soo qaatay xili ciyaareed layaableh waxayna ka mid noqon karaa xidigaha Milan lagu abaal marin karo.
Saadaasha Shaxda Kooxda Aduunka Ugu Fiican Ee Gool24 Oo Dhamaystiran:
Goolhaye: Alisson Becker (Brazil, Liverpool)
Afarta Difaaca Ah
Difaaca Midig: Trent Alexander-Arnold (England, Liverpool)
Difaaca Dhexe: Virgil van Dijk (Netherlands, Liverpool)
Difaaca Bidix: Aymeric Laporte (France, Manchester City)
Difaaca Dhexe: Matthijs de Ligt (Netherlands, Ajax/Juventus)
Dhexda: Frenkie de Jong (Netherlands, Ajax/FC Barcelona)
Dhexda: Eden Hazard (Belgium, Chelsea/Real Madrid)
Dhexda: Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)
Weerarka Bidix: Sadio Mane (Senegal, Liverpool )
Weerarka Dhexe: Kylian Mbappe (France, Paris Saint-Germain)
Weerarka Midig: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)
Soo Xulaha Shaxdan: Mahamoud Batalaale
Haddaba akhriste, miyaad shabakada Gool24 ku raacsan tahay xulashadeeda saadaasha shaxda kooxda aduunka ugu fiican ee ka soo bixi karta liiska 55 ka xidig ee ay FIFA shaacisay?
Haddii aanad saadaashan nagu raacsanayn, miyaad nala wadaagi kartaa saadaashaada oo aad ku salaysay musharixiinta 55ka ah ee 11 ka mid ah ay FIFA bishan ku abaal marin doonto Milan? Halkan hoose noogu dhaaf shaxda saadaashaada oo ka kooban 11 ka xidig ee kuula suurtogalsan.